Mellon: Dakhli go'an oo Dakhli ah
Nooca: Maalgashiyada la isku daray
Mawduuca: Buildings & Housing, Energy Efficiency, Renewable Energy
Dhuxul gubidda ayaa ah mid muhiim u ah isbedelka cimilada, taas oo iyaduna keenaysa khataro muddo dheer ah oo ku wajahan dhaqaalaheena iyo macaashka McKnight.
$ 189 malyan oo dusha sare ah; geedaha bilaashka ah ee laga soo bilaabo sannadka 2016
Marka la eego in McKnight ay ka bixisay $ 160 milyan oo deeqo ah oo ay ku bixiso hay'adaha horay u soo maray mustaqbal hoose oo ka hooseeya taniyo 1992, dakhliga dhaadheer ee dhuxusha ayaa ahaa aag isku mid ah oo ka dhexjiray yoolalkeena danaha iyo danteena. Hantidhawrka dakhliga ee ballaadhan ee maalgashiga ah ee maalgelinta dawladda, shirkadaha iyo shirkadaha dammaanad-dulsaaray ayaa hadda aan dhuxul lahayn.
Qiimaynta dakhliga ee joogtada ah; Tilmaamaya qiyaastaas
Boortaqo-la'aanta aan la daboolin waxay soo buuxinayaan bartilmaameedkeeda, portfolios ah $ 189 milyan sida Q3 2017
Doorashooyin badan: Maamulaha sanduuqa McKnight Mellon wuxuu ahaa lamaane waxtar leh dhuxusha dhuxusha laga soo qaaday liistadeena. Portfolio Tani waxay muujinaysaa dhuxusha ciyaaraha iyo sidoo kale macdanta iyo shirkadaha kale ee leh kaydka dhuxusha. Maamulaha lacagtu waxa kaliya oo uu lahaa inuu iibiyo 8 bond ah oo lagu qiimeeyo $ 1.6 malyan oo ka mid ah miisaaniyadda bangiga 1,500.
Jaaliyado Ku-meel-gaadh ah: Saameynteena barnaamijkeena maalgelinta wuxuu leeyahay fursado xiiso leh oo lagu maalgaliyo tamar nadiif ah, sidoo kale waa lagama maarmaan in la taageero bulshooyinka ku tiirsan dhuxusha kuwaas oo dib u soo kabanaya dhaqaalahooda.
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 3/2020